ဒီကစားသမားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါပဲ
ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားများ
19 Oct 2018 . 3:18 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက ချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်လူ ဖာဘရီဂတ်စ် Fabregas ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပွဲအနည်းဆုံးနဲ့ ဂိုးဖန်တီးမှု(၁၀၀)ပြည့်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရဖို့ဆိုရင် သူများတွေထက် ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ပြသနိုင်မှဖြစ်မှာပါ။ ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ ဖာဘရီဂတ်စ်လိုပဲ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ သူတို့တွေထဲက ကစားသမားတချို့ကို ပရိသတ်တွေ ဗဟုသတရစေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ဂျက်စ်ဖောင်တိန် Just Fontaine (ပြင်သစ်)
ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င် တိုက်စစ်မှူး ဂျက်စ်ဖောင်တိန်ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်ဝင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ပြင်သစ်အသင်းအတွက် (၆)ပွဲကစား (၁၃)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့ပြီး ရွှေဖိနပ်ဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးခဲ့သူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ ပြင်သစ်အသင်းကတော့ ကံမကောင်းခဲ့ဘဲ ချန်ပီယံဆုနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ပြီး တတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။
ရိုဂျယ်ရီယိုဆယ်နီ Rogerio Ceni (ဘရာဇီးလ်)
ဆော်ပေါ်လိုအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ဂိုးသမားကြီး ဆယ်နီက ဂိုးသမားတွေထဲမှာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမီနိုင်တဲ့ စံချိန်တင်ထားသူပါပဲ။ သူဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘ၀မှာ (၁၃၁)ဂိုးအထိ သွင်းခဲ့ပြီး ဂိုးသမားထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေသလို ကလပ်တစ်သင်းတည်းအတွက် ပွဲအများဆုံးကစားသူ (ဆော်ပေါ်လို -၁၂၃၇ပွဲ)၊ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပွဲအများဆုံးကစားသူစတဲ့ စံချိန်တွေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဂျုံးစ်ဆမ်မြူရယ်လ်ဆန် Jone Samuelsen (နော်ဝေ)
ဒီကစားသမားကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သိပ်မသိပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကတော့ အံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆမ်မြူရယ်လ်ဆန်ဟာ အဓိကပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အကွာအဝေး အများဆုံး ခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုး သွင်းယူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁၊ စက်တင်ဘာ (၂၅)ရက်က Tromso အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ODD Grenland အသင်းအတွက် ဆမ်မြူရယ်လ်ဆန်ဟာ (၅၈.၁၃)မီတာ (၆၅.၅၇ ကိုက်)ကနေ ခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ဒါဟာ ကမ္ဘာ့စံချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆမ်မြူရယ်လ်ဆန်ရဲ့ ခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုး ကြည့်ရန်လင့်ခ်
ပီလီ Pele (ဘရာဇီးလ်)
ဘရာဇီးလ်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ပထမဆုံးပြေးမြင်မိတာက ပီလီပါပဲ။ ပီလီလို ခြေစွမ်းပိုင်းရော၊ အောင်မြင်မှုပိုင်းမှာပါ ပြည့်စုံတဲ့ကစားသမားမျိုး ဘရာဇီးလ်အသင်းမှာ နောက်ထပ် ပေါ်လာဖို့ မလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆု (၃)ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး သမိုင်းတစ်လျှောက် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို အကြိမ်အများဆုံးရယူခဲ့သူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားတယ်။ နောက်ပြီး ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက်လုံး (၁၂၇၉)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။
ဘီဂိုဗစ် Asmir Begovic (ဘော့စနီးယား)
စတုတ်စီးတီးဂိုးသမားဟောင်း ဘီဂိုဗစ်ကလည်း ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်စာအုပ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခံထားရသူပါ။ ၂၀၁၃၊ နိုဝင်ဘာလ(၂)ရက်က ဆောက်သမ်တန်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဘီဂိုဗစ်ဟာ သူ့ဘက် ပယ်နယ်တီဧရိယာထဲကနေ ကန်တင်လိုက်တဲ့ဘောလုံးက ပြိုင်ဘက်ဂိုးပေါက်ထဲ တန်းဝင်သွားခဲ့ပြီး အဲဒီဂိုးကို ပရိသတ်တွေ အမှတ်ရနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂိုးအကွာအဝေးက (၉၇.၅)ကိုက်အထိရှိလို့ အကွာအဝေးအများဆုံး သွင်းဂိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘီဂိုဗစ်ရဲ့ သွင်းဂိုးကို ကြည့်ရန် လင့်ခ်
Photo:YouTube,Esportes,Sportsbibelen,CNN International,Stoke City FC,Goal Profits
ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ဘောလုံးသမားမြား
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးက ခယျြလျဆီးကှငျးလယျလူ ဖာဘရီဂတျဈ Fabregas ဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပှဲအနညျးဆုံးနဲ့ ဂိုးဖနျတီးမှု(၁၀၀)ပွညျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျဂုဏျပွုမှတျတမျးကို လကျခံရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဂငျးနဈမှတျတမျးမှာ ထညျ့သှငျးဖျောပွခံရဖို့ဆိုရငျ သူမြားတှထေကျ ထူးခွားတဲ့စှမျးဆောငျရညျ ပွသနိုငျမှဖွဈမှာပါ။ ဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ ဖာဘရီဂတျဈလိုပဲ ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျမှတျတမျးကောငျး ပိုငျဆိုငျခဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တယျ။ သူတို့တှထေဲက ကစားသမားတခြို့ကို ပရိသတျတှေ ဗဟုသတရစဖေို့ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ဂကျြဈဖောငျတိနျ Just Fontaine (ပွငျသဈ)
ပွငျသဈဂန်ထဝငျ တိုကျစဈမှူး ဂကျြဈဖောငျတိနျဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈခုတညျးမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ဂငျးနဈစံခြိနျဝငျထားသူဖွဈပါတယျ။ ၁၉၅၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ပွငျသဈအသငျးအတှကျ (၆)ပှဲကစား (၁၃)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့ပွီး ရှဖေိနပျဆုကိုလညျး ဆှတျခူးခဲ့သူပါ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ ပွငျသဈအသငျးကတော့ ကံမကောငျးခဲ့ဘဲ ခနျြပီယံဆုနဲ့ လှဲခြျောခဲ့ပွီး တတိယနရောနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။
ရိုဂယျြရီယိုဆယျနီ Rogerio Ceni (ဘရာဇီးလျ)
ဆျောပျေါလိုအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျဂိုးသမားကွီး ဆယျနီက ဂိုးသမားတှထေဲမှာ ဘယျသူမှ လိုကျမမီနိုငျတဲ့ စံခြိနျတငျထားသူပါပဲ။ သူဟာ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားသမားဘဝမှာ (၁၃၁)ဂိုးအထိ သှငျးခဲ့ပွီး ဂိုးသမားထဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနသေလို ကလပျတဈသငျးတညျးအတှကျ ပှဲအမြားဆုံးကစားသူ (ဆျောပျေါလို -၁၂၃၇ပှဲ)၊ အသငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ပှဲအမြားဆုံးကစားသူစတဲ့ စံခြိနျတှကေိုပါ ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
ဂြုံးဈဆမျမွူရယျလျဆနျ Jone Samuelsen (နျောဝေ)
ဒီကစားသမားကိုတော့ ပရိသတျတှေ သိပျမသိပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျကတော့ အံ့အားသငျ့စရာပါပဲ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဆမျမွူရယျလျဆနျဟာ အဓိကပွိုငျပှဲတဈခုမှာ အကှာအဝေး အမြားဆုံး ခေါငျးတိုကျသှငျးဂိုး သှငျးယူခဲ့လို့ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၁၊ စကျတငျဘာ (၂၅)ရကျက Tromso အသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ODD Grenland အသငျးအတှကျ ဆမျမွူရယျလျဆနျဟာ (၅၈.၁၃)မီတာ (၆၅.၅၇ ကိုကျ)ကနေ ခေါငျးတိုကျဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး ဒါဟာ ကမ်ဘာ့စံခြိနျဖွဈခဲ့တယျ။
ဆမျမွူရယျလျဆနျရဲ့ ခေါငျးတိုကျသှငျးဂိုး ကွညျ့ရနျလငျ့ချ
ပီလီ Pele (ဘရာဇီးလျ)
ဘရာဇီးလျလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ ပထမဆုံးပွေးမွငျမိတာက ပီလီပါပဲ။ ပီလီလို ခွစှေမျးပိုငျးရော၊ အောငျမွငျမှုပိုငျးမှာပါ ပွညျ့စုံတဲ့ကစားသမားမြိုး ဘရာဇီးလျအသငျးမှာ နောကျထပျ ပျေါလာဖို့ မလှယျကူတော့ပါဘူး။ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆု (၃)ကွိမျရရှိခဲ့ပွီး သမိုငျးတဈလြှောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို အကွိမျအမြားဆုံးရယူခဲ့သူအဖွဈ စံခြိနျတငျထားတယျ။ နောကျပွီး ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျလုံး (၁၂၇၉)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ ဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈလညျး သတျမှတျခံထားရသူပါ။
ဘီဂိုဗဈ Asmir Begovic (ဘော့စနီးယား)
စတုတျစီးတီးဂိုးသမားဟောငျး ဘီဂိုဗဈကလညျး ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျစာအုပျထဲမှာ ထညျ့သှငျးဖျောပွခံထားရသူပါ။ ၂၀၁၃၊ နိုဝငျဘာလ(၂)ရကျက ဆောကျသမျတနျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဘီဂိုဗဈဟာ သူ့ဘကျ ပယျနယျတီဧရိယာထဲကနေ ကနျတငျလိုကျတဲ့ဘောလုံးက ပွိုငျဘကျဂိုးပေါကျထဲ တနျးဝငျသှားခဲ့ပွီး အဲဒီဂိုးကို ပရိသတျတှေ အမှတျရနဆေဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒီဂိုးအကှာအဝေးက (၉၇.၅)ကိုကျအထိရှိလို့ အကှာအဝေးအမြားဆုံး သှငျးဂိုးအဖွဈ သတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။
ဘီဂိုဗဈရဲ့ သှငျးဂိုးကို ကွညျ့ရနျ လငျ့ချ